Ifulethi Lendlu Yekalishi - I-Airbnb
Ifulethi Lendlu Yekalishi
Barneys River Station, Nova Scotia, i-Canada
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Louise & Oonagh
U-Louise & Oonagh Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Nov 4.
"I-Carriage House" iyunithi eziqukethwe yona futhi ehlukene kule ndawo yezwe ethuthukisiwe. EZITHOLAKALA UNYAKA WONKE, leli fulethi elingu-1200 sq ft elinefenisha ephelele futhi eliqokwe ngokukhethekileyo litholakala eSerendipity Stables, ipulazi lomndeni eliphethwe yi-equestrian hobby farm eBarneys River, Pictou County, NS. Sitholakala kalula ngemizuzu engu-20 uma ushayela usuka e-St. Francis Xavier University e-Antigonish.
"I-Carriage House" itholakala e-Serendipity Stables e-Barneys River, izwe elisemaphandleni elibeka ikhilomitha elilodwa ukusuka e-Trans Canada Hwy / Hwy 104 e-Pictou County Nova Scotia. Kuwuhambo lwemizuzu engama-25 ukusuka e-Antigonish ekhangayo nase-St Francis Xavier University. I-Carriage House itholakala ngenhla kwegaraji lezimoto ezintathu futhi iyingxenye ehlukile yeSerendipity Stables.
I-Carriage House iyifulethi elinomqondo ovulekile futhi ifaneleka kangcono umbhangqwana ongashadile uwedwa noma nabangani noma umndeni. Kukhona umbhede olingana nendlovukazi ekamelweni elilodwa elivalekile futhi indawo evulekile enkulu iqukethe i-futon ephindwe kabili kanye nombhede owodwa ongakhelwa izivakashi ezengeziwe. Noma yimiphi imibuzo emayelana nokufaneleka kweqembu lakho, ingasingathwa kangcono ngokuthinta umsingathi.
I-HDTV ene- Apple TV
ubusuku obungu-7 e- Barneys River Station
Izivakashi kufanele ziqinisekise ukuthi zinethangi eligcwele legesi kanye nokuthenga ukudla okubalulekile okwenziwe ngaphambi kokufika. Kunesitolo esisodwa kuphela esisebenziseka kalula/sewayini/kabhiya kanye nebha yegesi cishe okuqhele ngamakhilomitha ayi-10. Izindawo zokudlela eziseduze nezitolo zokudla zitholakala e-Antigonish 20 mins away and New Glasgow 30 mins away.
Ibungazwe ngu-Louise & Oonagh
U-Louise no-Oonagh ngokuvamile basendaweni futhi bayakwazi ukusiza nganoma imiphi imibuzo noma ukukhathazeka okungenzeka ube nakho. U-Louise usebenza endlini enkulu phakathi nosuku kanti u-Oonagh ngokuvamile usebenza ngaphandle, eduze nenqolobane, namahhashi noma umatasa ulungisa impahla.
Bobabili u-Oonagh no-Louise banamaseli futhi lezo zinombolo zamaseli zizonikezwa lapho ufika.
U-Louise no-Oonagh ngokuvamile basendaweni futhi bayakwazi ukusiza nganoma imiphi imibuzo noma ukukhathazeka okungenzeka ube nakho. U-Louise usebenza endlini enkulu phakathi nosuku…
ULouise & Oonagh Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Barneys River Station namaphethelo